धार्मिक कट्टरपन्थीको सनकले जन्माएको धर्मकथा अन्तर्राष्ट्रिय . विचार१६ साउन २०७७
विज्ञलाई यक्ष प्रश्न : नफैलिई महामारी रोकिन्छ ? आज समाजलाई त्रासको होइन, सचेतना र सत्यको आवश्यकता छ । गम्भीर संक्रमितको संख्या कुन अनुपातमा बढ्दै छ ? अस्पतालले यस्ता संक्रमितको चाप धान्न सक्ने स्थिति छ वा छैन ? त्यो हेरेर लकडाउन लगाउने वा अन्य कदम चाल्नु राम्रो हुन्छ विचार२१ साउन २०७७
ओलीको शासनमाथिको कालो बादल जनताको ठूलो लडाइँबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि लगातार खेलवाड गरिँदा त्यसले प्रतिगामीहरूलाई फाइदा पुग्छ । प्रतिगामीहरूलाई फाइदा पुग्ने खालका गतिविधि हुन नदिन नेकपाभित्रैको शक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ विचार२० साउन २०७७
प्रचण्डलाई ओलीले भने: ‘अबको प्रधानमन्त्री तपाईं’ प्रचण्ड: (झोकिँदै) रित्तो भकारीको मालिक बनाएर मेरो जीवन चल्छ काम्रेड ? ओली: ए, श्रम नगरी खान भनेको छ हाम्रो सिद्धान्तले ? भकारी दिएको छु, अन्न भर्नतिर लाग्नुपर्‍यो नि काम्रेड ! ब्लग२० साउन २०७७
प्यारा ओली ब्राण्ड हनुमानहरू ! पीके देखेर तिमेरलाई जस्तै मलाई नि दया लाग्छ हौ । अलि दिनअघि केटोलाई जंगली भन्देको ‘फायर’ भएछ । राम्रो सम्बन्ध भा'को बेला जेएनले ल्याइदेको ‘ग्रिन टी’ बालुवा दरबारमा बोलाएर खुवाउन परो । टी हानेर पीकेलाई एमकेलाई बुझ त भनेर पठा'को एमकेले हिन्दी र चाइनिज भाषा सिका'र पठाएछन् ब्लग२० साउन २०७७
मनुजबाबु : एउटा ‘सिर्जनशील सनक’ कविता सुनिसकेपछि उनले बनाएर राखेका केही रङ्गीन र केही स्केचका ढड्डा अगाडि ल्याए र भने, ‘कुनकुन मनपर्छ, कुनकुन कविताहरूमा मिल्छन्, सबै लिएर जानू अनि किताब छापिएपछि किताबसँगै चित्र ल्याइदिनू’ विचार . कला / साहित्य१९ साउन २०७७
जीवन आचार्य अर्थात् एउटा सुन्दर स्मार्ट कार्ड अनि धेरै बेरपछि बल्लबल्ल श्रीमतीलाई भनेँ, ‘लक्ष्मी, जीवनसँग दाँज्न मिल्ने मेरो उमेरबाहेक अरू केही पनि छैन । त्यही भएर उमेर दाँजेको । अरू क्षेत्रमा त म कसरी दाँजिन सक्छु र ऊसँग ?’ विचार . कला / साहित्य१८ साउन २०७७
ठूलाे मौका गुमाएका ठूला राजनीतिज्ञ सत्तामा जाँदा क्रान्तिकारी प्रचण्ड सिंहदबारको ढोकाबाहिरबाटै अलप हुन्छ, भित्र जान्छ त केवल पुष्पकमल दाहाल मात्र । १४ वर्ष जेल बसेर क्रान्तिको रापमा खारिएको ओली सत्तामा जाँदा नेल्सन मण्डेला भएर निस्कँदैन, डोनाल्ड ट्रम्पको नेपाली अवतार भएर निस्कन्छ विचार१६ साउन २०७७
धार्मिक कट्टरपन्थीको सनकले जन्माएको धर्मकथा धर्मनिरपेक्षताको ठूलो आधार भनेको त्यहाँको सेना, न्यायपालिका र उच्च शिक्षाका संरचना हुन् । जसले टर्कीलाई एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा अघि बढ्नका लागि योगदान गरिरहेका छन् । त्यसैले सन् २०१६ मा सत्ता ‘कु’ को असफल प्रयासपछि एर्दोआनले आफ्नो निशाना शिक्षा क्षेत्र, न्यायालय र सेनामाथि नै केन्द्रित गरेका थिए अन्तर्राष्ट्रिय . विचार१६ साउन २०७७
योगको वैज्ञानिक पक्ष ‘नियम’ भन्नु नै ‘आत्म-अनुशासन’ हो । आत्म-अनुशासन व्यक्तिले आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । सौच, सन्तोष, तप (आत्म-संयम, धैर्य तथा दृढता), स्वाध्याय, कर्मप्रति आस्था आदि अनुशासन पालना गर्नाले आत्म-अनुशासन फलित हुन्छ विचार१२ साउन २०७७
हीरा आकाश अर्थात् नचम्किएको हीरा ऊ सधैँ अफिसको ऋणमा हुन्थ्यो । सापटी कट्टी गर्दा हरेक महिना थोरै मात्र हातमा पर्थ्यो । उसको पिउने बानी अफिसभित्र पनि चर्चित हुँदै गयो । कर्मचारी व्यवस्थापनले हेर्ने नजर नकारात्मक हुन थाल्यो । त्यसको प्रभाव उसको पदोन्नतिमा पर्‍यो विचार . कला / साहित्य११ साउन २०७७
संयोजकज्यू ! रामचन्द्र पौडेल कसरी अर्बपति भए ? पञ्चायतका कठिन दिनमा कांग्रेसका नेताहरूलाई बास दिने कुरा सहज थिएन । त्यस कारण म दाबाका साथ भन्छु– तनहुँमा नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणमा रामचन्द्र पौडेलको भन्दा मेरो योगदान बढी छ ब्लग११ साउन २०७७
म महालेखाको कर्मचारी : अनियमित खर्च देख्छु तर... उनीहरूको ५० रुपैयाँ बढी भत्ता लिएको नाममा अनियमित खर्च देखाउने म र मेरा साथी ५ बजेसम्म काम गर्दा २० प्रतिशत भत्ता हुन्छ भनेर ५ बजेसम्म बसेर त्यसपछि काम गर्नुपरेको बाध्यता छ । किनकि त्यसो गर्दा ६० प्रतिशत भत्ता आउँछ अर्थ नीति . ब्लग९ साउन २०७७
किन गरिब मात्र जेलमा ? नियुक्ति, कार्यविधि, फैसला सबै । तर, पनि यही क्षेत्रमा म निरन्तर लागि रहेको छु । मलाई विश्वास छ, अब आउने पुस्ताले यसलाई बदल्नेछ । हामीले गरेको फोहोर नयाँ पुस्ताले सोर्ने छ । तर, २० वर्ष लाग्छ । भोलि इतिहास लेखिनेछ । इतिहासबाट डराउन सिक्नु सबैका लागि कल्याण हुन्छ ब्लग९ साउन २०७७
विनोद दाइ अर्थात् जोदाहा विनोद दाइ कमजोर मनका पटक्कै थिएनन् । जीवन र जगतप्रतिको सुझबुझमा उनी अग्रणी थिए । आमसमाज र समुदायलाई आशा र सम्भावना बाँड्थे । मान्छे हुनुको सार्थकता र गरिमाको विषय अरूलाई बुझाउँथे । तर, तिनै विनोद दाइले आफ्नो जीवन आफैँले किन समाप्त गरे ? ब्लग९ साउन २०७७
विपद्‌को समाजशास्त्र उपभोक्ता समितिबाट गरिने कुनै पनि काममा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने, जनशक्ति प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अहिले पनि निरन्तर छ । तर, स्थानीय तहमा कागजमा जहिल्यै यो नियम लागू भयो, व्यवहारमा कहिल्यै लागू भएन विचार७ साउन २०७७
मेरा श्रद्धेय पात्र विष्णुराज आत्रेय मेरा श्रद्धेय पात्र विष्णुराज आत्रेयबाट मैले आत्मीयता प्रशस्त पाएको भए पनि उहाँको ज्ञानरूपी सागरबाट पर्याप्त लाभ आर्जन गर्न भने नसकेको अनुबोध हुन्छ । यसको कारण म स्वयं हुँ किनभने मैले उहाँसँगको सम्पर्क र सङ्गतलाई सघन निरन्तरता दिन सकिनँ । उहाँका बारेमा यी शब्द लेखिरहँदा मलाई यस्तै लागेको छ विचार . कला / साहित्य७ साउन २०७७
बीपी, म र कांग्रेस बनारसस्थित मामुरगन्जको निरालानगर कोलोनीमा बस्दा बीपीले भनेका कुरा बीएचयूका प्राेफेसर सिंह अझै सम्झन्छन् । उनले भनेका छन्, ‘इमर्जेन्सीपछि भारत पनि जेल भइसक्यो । तर, हाम्रो जेल सानो छ, त्यहीँ जान्छु’ विचार६ साउन २०७७